Sida loo bilaabo ganacsi online ah | wararka e-commerce
Sida loo bilaabo ganacsi online ah
Encarni Arcoya | | StartUps iyo ganacsatada
'Haddii aadan internetka ku jirin, ma jirtid', weedha ayaa garaacday gambaleel? Waa shay, dhawr sano ka hor, kaa dhigi kara qosol. Laakiin maanta waxay ku dhowdahay xaqiiqo sababtoo ah dhammaanteen, ama ku dhawaad ​​dhammaanteen, waxay ka baaraan internetka waxa aan u baahanahay, xitaa marka aan haysanno meel gees ah. Taasi waa sababta ay qaar badani u bilaabaan inay abuuraan mareegaha iyo bogag, laakiin, Sida loo bilaabo ganacsi online ah oo aad runtii mustaqbal ku leedahay oo aanad xidhmin 6 bilood ama sanad ka dib?
Qofna, waana ku celinaynaa, qofna ma dammaanad qaadi karo in ganacsigaagu horumari doono markaad dhammayso. Haddii qof sameeyo, carar. Waana taas, mararka qaarkood, waxaynu luminaa caqli-galnimada, sababtoo ah sheekadii caanaha (oo aan hore u ognahay sida ay u dhacday). Laakiin waxa aan kuu sheegi karno ayaa ah in ay jiraan tillaabooyin taxane ah oo aan dhib lahayn in la tixgeliyo si loo tixgeliyo, oo leh madax qabow, si loo bilaabo ganacsi online ah oo la ilaaliyo waqti ka dib. Ma doonaysaa in aad ogaato waxa ay yihiin?
1 Talaabooyinka aadka u muhiimka ah ee lagu bilaabayo ganacsiga onlaynka ah
1.1 falanqeeyaan fikradaada
1.2 Falanqeeyaan tartanka
1.3 Abuur qorshahaaga ganacsi
1.4 Nakhshad degelkaaga
1.5 Sida loo bilaabo ganacsi online ah oo rasmi ah
1.6 Bilow istaraatiijiyad suuq-geyneed oo online ah
Talaabooyinka aadka u muhiimka ah ee lagu bilaabayo ganacsiga onlaynka ah
Haddii aad bilowdo fikrad, abuurista eCommerce ama wax kasta oo la xidhiidha internetka, waxa ugu horreeya ee aad maskaxda ku hayso waa in tan aan la samayn hal habeen. Si aan fikrad kuu siiyo; Abuuritaanka astaantaada gaarka ah, kan ku siin doona maamulka dadkana ku ogeysiiya, waxay qaadan kartaa inta u dhaxaysa hal ilaa saddex sano (oo inta badan waxay ku dhowdahay saddex marka loo eego hal). Marka laga hadlayo ganacsi ama eCommerce, tani waxa la kordhin karaa ilaa shan sano. Oo ma rabi lahayd inaad u adkaysato khasaaraha suurtogalka ah muddadaas? Sida ugu macquulsan waa maya.
Sababtaas awgeed, go'aamada laguma qaadan karo si fudud, waa in si fiican loo daraaseeyaa. Tallaabooyinkani waxay kaa caawin karaan inaad sameyso.
Ma habboona in aad ka fikirto in fikraddaadu tahay mid weyn, in qof kastaa uu jeclaan doono, in aad ku guuleysan doonto. Is weydii sababta ay u wanaagsan tahay, maxay dadka kale u rabaan inay iibsadaan.
Waa inaad falanqaysaa sida badeecadaada ama adeeggaagu yahay, haddii ay mustaqbalka leedahay, haddii ay tahay mid la miisaami karo... Dhammaan waxaas waa in laga jawaabaa ka hor inta aan la bilaabin habraac kasta.
Taladayadu waa inaad isku daydo inaad hesho fikrad aan si weyn looga faa'iidaysan (hadda wax walba waa la allifay) ama ugu yaraan u malaynaya kacaanka waxa la yaqaan. Waa dariiqa looga soocan karo inta kale.
Hadda waxaad si fiican u garanaysaa fikradaada, waad garanaysaa meelaha ay ku fiican tahay iyo meelaha ay ku liidato. Waxaad dhihi kartaa wax kasta oo ka dhigan midkan. Laakiin ka waran tartamayaashaada?
Maanta qof kastaa waxa uu leeyahay tartame, waana in aad lafaguraysaa iyaga. marka hore sababtoo ah waxay yeelan karaan wax la mid ah alaabtaada, waxaadna u baahan tahay inaad ogaato sida aad uga soocdo kuwa kale; iyo tan labaad sababtoo ah haddii uu jiro tartan badan, waxaa laga yaabaa inaysan ahayn ganacsi faa'iido leh sida aad u malaynayso marka hore.
Abuur qorshahaaga ganacsi
Inkasta oo waxa aad rabto ay tahay in aad abuurto ganacsi online ah, waxaa aad muhiim u ah in aad leedahay qorshe ganacsi oo qorshaynaya Maxay noqon doonaan tallaabooyinkaagu mustaqbalka dhow, dhexe iyo kan fogba, waa maxay daraasadda suuqa, macmiilkaaga bartilmaameedka ah, tartankaaga, sida aad u qaybin doonto, xeeladaha xayaysiinta, khayraadka ... Marka la soo koobo, wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u bilowdo mashruucaas.
Markaad haysato "jir ahaan" way fududahay inaad aragto inay qaabaysan tahay iyo inay yeelan karto mustaqbal. Haddii aadan samayn, waxaad halis u tahay inaad la kulanto dhibaatooyinka oo aadan haysan "barkimo" si aad uga gudubto caqabadaha.
Ka digtoonow, si fiican u naqshadee, maaha wax u qalma in la sameeyo sababtoo ah haddii ay taasi dhacdo, ma geli doonaan boggaaga mana heli doontid meeleyn wanaagsan ama SEO si aad u hesho booqashooyin. Haddii aadan aqoon sida loo sameeyo, waxaa fiican inaad qorto xirfadle si uu u sameeyo.
Waa runtaa waxaa jira bogag badan iyo xitaa shirkadaha martigeliya kuwaas oo haysta qalab ay ku abuuraan degelkaaga daqiiqado gudahood iyo aqoon la'aan. Laakiin dhab ahaantii ma filaysaa inaad la soo baxdo? Sidoo kale, maskaxda ku hay in aad yeelan doonto xaddidaadyo badan iyo heerka SEO ma aha kuwa ugu fiican ama sahlan in la dhigo.
Si aad u hesho mareegaha waxaad u baahan doontaa waxyaabaha soo socda:
Domain Waa url-ka degelkaaga, ciwaanka ay dadku ku qasbanaan doonaan in ay geliyaan browserskooda si boggaagu u soo baxo.
Martigelin: Waa martigelinta meesha dhammaan faylasha ka kooban boggaaga ay noqon doonaan. Waxaa muhiim ah in la doorto mid tayo leh si uu u muuqdo oo u shaqeeyo 24 saacadood maalintii oo aanu ku siin wax dhibaato ah.
Shahaadada SSL: Waa lama huraan hadda, amniga mareegahaaga iyo Google inay kuu arkaan ganacsi badbaado leh.
Marka aad haysato mareegahaaga, wax badan oo kale ma jiri doonaan.
Sida loo bilaabo ganacsi online ah oo rasmi ah
Kahor intaadan bilaabin inaad ka shaqeyso ganacsigaaga khadka tooska ah, waxaa muhiim ah inaad haysatid dhammaan arrimaha sharciga. Tusaale ahaan, in aad iskaa u shaqeysato, ama ugu yaraan aad ka diiwaan gashan tahay Khasnadda si aad u caddeyso VAT iyo faa'iidooyinka aad hesho, dooro foomam kale oo sharci ah, la yeelo maamule ama lataliye kaa caawiya arrimahan, iwm.
Bilow istaraatiijiyad suuq-geyneed oo online ah
Waa shay lagama maarmaan ah sababtoo ah "suuqa" ayaa runtii noqon doona shabakada internetka waana meesha aad u baahan tahay inaad ku soo jiidato macaamiisha si aad u awoodo inaad u haysato oo aad ka dhigto inay wax kaa iibsadaan. Taasi waa sababta ay tahay inaad ogaato sida loo fuliyo hawshan (oo aan hore kuugu sheegnay inaysan habeen ahayn) iyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ee suurtogalka ah.
Oo iska ilaali, waa maxay Istaraatiijiyad suuqgeyneed kaliya kuma koobna SEO iyo meelaynta shabakada, laakiin sidoo kale waxa ku jira, shabakadaha bulshada, suuqgeynta iimaylka... Haddii aadan si fiican u qeexin tan, si kasta oo ganacsigaagu u wanaagsan yahay, mar dhow ama ha dheeraato way gujin doontaa.
Istaraatiijiyad muuqaal ah ayaa sidoo kale kaa caawin karta tan, sababtoo ah waxay ka dhigi doontaa ganacsigaaga mid si fiican loo yaqaan (iyada oo loo marayo xayeysiinta, wakaaladaha, iwm.).
Mar haddii wax walba ay socdaan oo ay socdaan, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad shaqeyso oo aad ku dadaashaa inaad ganacsigaaga ka dhigto mid online ah oo aad awoodo, waqti ka dib, inaad nolol ka sameysato haddii aad wax walba si sax ah u sameysay. Ma leedahay meherad online ah oo aad ka abuurtay meel eber ah? Ma noo sheegi kartaa siday ahayd waayo-aragnimadaada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka ECommerce » Xaqiiqda iyo wararka » StartUps iyo ganacsatada » Sida loo bilaabo ganacsi online ah
waa maxay dib u suuqgeyntu